BGF – Page2– democracy for burma
ွဲGoogle boss calls for free speech in Myanmarအမှုဆောင် ဥက္ကဋ္ဌ အဲရစ်ရှမစ် နှင့် မြန်မာ IT ပညာရှင်များ ဆွေးနွေးပွဲ-VIDEO
On March 22, 2013 March 23, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
He said that the company’s first priority in Myanmar would be to to improve access to information through its search, translation and mapping applications.
Speaking to Mizzima at the event, Amy Kunrojpanya, head of communications and public affairs at Google, said “It’s very easy to assume things when you look at the GDP numbers, internet penetration, smartphone usage, mobile phone penetration, then when you get into the country and you catch the excitement of the people. There isalot of potential that we can explore.”
On the eve of Schmidt’s speech, Google announced that it had launchedadedicated browser for Myanmar at http://www.google.com.mm.
PHOTO CREDIT SUNNY 22 MARCH 2013
This visit marks the latest step in Myanmar’s rapidly developing tech and telecoms sector. The country currently has one of the lowest internet usage and mobile phone penetrations in the world and more than 90 telecoms firms have reportedly bid for tenders for four telecoms operating licenses.
Google အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌ အဲရစ်ရှမစ် ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိ၊ ပြည်တွင်းအိုင်တီ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အိုင်တီဝါသနာရှင်များနှင့် MICT Park ၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေ
Google ၏ အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌ အဲရစ်ရှမစ်သည် မတ်လ ၂၂ ရက်(ယနေ့) နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဲရစ်ရှမစ်သည် ၄င်း၏ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွင်း ပထမဆုံးအဖြစ် အိုင်တီနယ်ပယ်မှ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ပညာရှင်များ၊ အိုင်တီဝါသနာရှင်များနှင့် MICTDC ရှိ Conference Hall တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ တစ်ရပ်ကို မတ်လ ၂၂ ရက်(ယနေ့) နံနက် ၉နာရီ ခွဲခန့်တွင် စတင်ပြုလုပ်လျှက် ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲသို့ အခြားနယ်ပယ် အသီးသီးမှ စိတ်ပါဝင်စား သူများလည်း တက်ရောက်လေ့လာ နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲတွင် အင်တာနက်ကို အသုံးချ၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အဓိကထား ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာ အသင်းချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူများ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
အဲရစ်ရှမစ်သည် ၂၀၁၃၊ ဇန်န၀ါရီလ အတွင်းက မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ မလာရောက်မီ အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။
Google သည် အင်တာနက် ရှာဖွေရေး အင်ဂျင်အဖြစ်သာမက Gmail, Google+ စသည့် အခြားဝန်ဆောင်မှုများနှင့် Google Nexus စသည့် ထုတ်ကုန်များပါ ကျော်ကြားမှုရှိနေပြီး ယင်းဝန်ဆောင်မှုများကို ပြည်တွင်း၌ သုံးစွဲမှုများစွာ ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
Google Company ကို ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် Larry Page နှင့် Sergey Brin တို့က စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် Larry Page က စီအီးအိုအဖြစ် တာဝန်ယူ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။ အဲရစ်ရှမစ် အနေဖြင့် Google တွင် စီအီးအိုအဖြစ် ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် Larry Page က စီအီးအိုအဖြစ် ပြောင်းလဲတာဝန်ယူ လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
Google အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌ အဲရစ်ရှမစ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ မလာရောက်မီ တစ်ရက်အလို မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့၌ Google ၀က်ဘ်ဆိုက်ကို www.google.com.mm ဟူသော မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု ဒိုမိန်းဖြင့် စတင်အသုံးပြု လာနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
သိမ်းထားသည့် BGF လက်နက်များပြန်လည်ပေးအပ်ရန် DKBA နှင့် အစိုးရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ဇန်န၀ါရီလ ၂၂ရက်၊ ၂၀၁၃ခုနှစ်။ နန်းသူးလေ (ကေအိုင်စီ)
On January 22, 2013 January 23, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်ဘွဲ့မြို့နယ်၊ မြိုင်ကြီးငူအထူးဒေသတလျှောက် လှုပ်ရှားနေသည့် ဒီမိုကရေစီကရင်အကျိုးပြု တပ်မတော်-DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ ယခုလ ၅ရက်နေ့တွင် သိမ်းဆည်းထားသည့် နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့-BGF ၏ လက်နက် ၄၀ ကျော်ကို ပြန်လည်ပေး အပ်ရန် မြန်မာအစိုးရနှင့် DKBA တို့ ယနေ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ ဒုဥက္ကဋ္ဌ သမ္မတရုံး ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း၊ ပြည်သူ့စစ်နှင့် နယ်ခြားစောင့်တပ်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်အုန်း စသည့် အဖွဲ့ဝင် ၉ဦးနှင့် DKBA ဘက်မှ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောလားပွယ် ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့ဝင် ၈ဦးတို့သည် မနက် ၁၂နာရီခန့်မှ ညနေ ၃နာရီကျော်အထိ မြ၀တီမြို့ အစိုးရရှေ့တန်း ရုံးတွင် တွေ့ဆုံခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။DKBA ပြောရေးဆိုခွင့်ဖြစ်သူ ဗိုလ်မှူးစောဆန်းအောင်က “ယနေ့တွေ့ဆုံပွဲမှာ DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်များ သိမ်းဆည်း ထားသည့် လက်နက်များ ကို ပြန်လည်ပေးအပ်ရန်တို့ကိုသာ အဓိကဆွေးနွေးခဲ့ တယ်။ နောက် မြိုင်ကြီးငူဒေသ တ၀ိုက် မှာ DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွက် သွားရေးလာရေးခက်ခဲ၊ နယ်ခြားစောင့်တပ်များနဲ့ ဖြစ်တဲ့ ပဋိပက္ခတွေ ဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
လက်နက်ပြန်လည် ပေးအပ်ရန်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ DKBA ဘက်မှ BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်များထံသို့ လက်နက် တချို့ ပြန်လည်ပေးအပ်ပြီး ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကျန်နေသေးသည့် လက်နက်များကိုလည်း ပြန်လည်ပေး အပ်ရန် ပြင် ဆင် နေကြောင်း ဗိုလ်မှူးစောဆန်းအောင်က ဆက်ပြောသည်။
ဆက်လက်၍ ဦးအောင်မင်းကလည်း “ကျနော်တို့တွေ တွေ့ကြတာ တပ်နေရာချထားရေး ကိစ္စရပ်တွေ၊ ဆက်ဆံ ရေးရုံးဖွင့်မယ့် ကိစ္စရပ်တွေ၊ နောက် သူတို့(ဒီကေဘီအေ)ရဲ့ စားရေးသောက်ရေး ကိစ္စရပ်တွေ ဒါမျိုးတွေ ဆေးနွေးကြပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
ဆက်ဆံရေးကို ကြာအင်းဆိပ်ကြီး၊ ဘုရားသုံးဆူ၊ ကျိုက်ဒုံနှင့် မြိုင်ကြီးငူ စသည့်နေရာ ၄ခုတွင် ထပ်မံဖွင့်လှစ်ရန် ရှိသည်ဟု ဒီကေဘီအေ ဘက်က ပြောသည်။ သို့သော် ဖွင့်လှစ်မည့် အချိန်နှင့်ပတ် သက်၍ ရက်အတိအကျ သတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
ထို့အပြင် ယနေ့တွေ့ဆုံမှုတွင် နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေးအရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး မှုမျိုးမဟုတ်ပဲ DKBA နှင့် နယ်ခြားစောင့် တပ်အကြား ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လက်နက်နှင့် တိုက်ပွဲပဋိပက္ခများ ထပ်မံမဖြစ်ပေါ်အောင်သာ ကတိက၀တ်ပေး သည့် ဆွေးနွေးမှုမျိုးသာ ဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်မှူး စောဆန်းအောင်က ပြောသည်။
တချိန်တည်းမှာပင် ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးနေချိန်တွင် ကချင်လက်နက် ကိုင်အဖွဲ့အများကို အစိုးရမှ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ပွဲဆင်နေမှုသည် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန် အဟန့်အတားဖြစ်ကြောင်းလည်း DKBA ဘက်မှ တင်ပြခဲ့သည်ကို ၀န်ကြီးဦးအောင်က လာမည့် သုံးလေးရက် တွင် ကချင်ဒေသစစ်ပွဲကိစ္စ အဆင်ပြေသွားမည်ဟု ပြောသွားခဲ့ကြောင်း ဗိုလ်မှူး စောဆန်းအောင်က ဆိုသည်။
အစိုးရဘက်က တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည် ညီညွှတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုး များ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ-UNFC နှင့် သာ နိုင်ငံရေးအရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်မှသာလျှင် DKBA အနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွင် ပါဝင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း DKBA ဘက်က ပြောသည်။
DKBA သည် ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး-KNU ခွဲထွက်ကာ မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ ပြန်ပေါင်းပြီး နောက် ၂၀၁၀ ခုနှစ်၌ မြန်မာအစိုးရ၏ နယ်ခြားစောင့်အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို DKBA အဖွဲ့ထဲမှ လက်မခံသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောလားပွယ်ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့က အသစ်တက်လာသည့် မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်နှင့် တိုက်ပွဲ များပြန်လည် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
တဖန် DKBA သည် ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလဆန်းပိုင်းတွင် မြန်မာအစိုးရနှင့် ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖားအံမြို့တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြုလုပ်ကာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီမှု ထပ်မံရရှိခဲ့သလို ၎င်းနောက်ပိုင်း တိုး တက်သောဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော်-DKBA မှ ဒီမိုကရေစီကရင်အကျိုးပြုတပ်မတော်-DKBA အဖြစ် ယနေ့အထိ ရပ်တည်ခဲ့သည်။
ENGLISH PAGE http://www.dvb.no/news/karen-rebel-group-returns-seized-weapons-to-border-guard-force/25962
Burma: KNU’s Relation Office Opening Ceremony proved the government of division ruling
On August 20, 2012 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
One of KNU district Secretary said attending of the fourth times Karen National Union’s Myawaddy Relation Office opening ceremony just including government ministers, Senator Commissions and state headers, proved that cause the division between ethnic groups.
He continued and said, “This is the same as using mind attack upon Southern Ceasefire ethnic group. They invited ethnic groups such as Mon, Karen, DKBA, BGF. And then, besides ministers of the government, Senator Committee, States Chairmen, official political party and also invited personally to importance persons. So, we can see that KNU’s office opening ceremony was teeming crowd with about 600 attendance people. If look back and consider to ethnic affairs, this isameaning of consoling for Southern group”
The persons whose government invited are General San Aung from Kalohtoobaw DKBA, General Kyaw Thet, Saw Nay Soe Mya from Peace Council, Administrative and General Chit Thu from Border Guard No. (3), General Moke Thon, responsible person form Myawaddy district, National League for Democratic (NLD) and Phalon-sawor party.
Furthermore, they invited to MNSP’s Chairman and vice chairman. However, executive member of NMSP Nai Tala Nyi and Nai Win Hla leaded and attended to ceremony. Continue reading “Burma: KNU’s Relation Office Opening Ceremony proved the government of division ruling” →
ชาวบ้านกะเหรี่ยงหนีเข้าไทย หลัง BGF พม่าปะทะ DKBA wmv
Bai Xuoqian, head of the Kokang Self-Administered, Zone, shot by an unhappy Border Guard Force (BGF) fighter in Kongyan township
On March 21, 2012 March 21, 2012 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Bai Xuoqian, head of the Kokang Self-Administered, Zone, shot by an unhappy Border Guard Force (BGF) fighter in Kongyan township. The incident took place before the Chinese New Year which fell on 8 February, according to the source. Two bodyguards, 1 soldier andawoman were killed. Among the wounded was his deputy Liu A Bao. No further details. (SHAN)
ကိုးကနျ့ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရဒသေ အုပျခြုပျရေးမှူး ပိုငျဆုံခြိနျ နှငျ့အဖှဲ့ နယျမွမွေောကျဘကျခွမျးသို့ ခရီးထှကျစဉျ ၎င်းငျးအားမကနြေပျသညျ့ နယျခွားစောငျ့တပျရဲဘျောတဦး၏ ပဈခတျမှုကွောငျ့ ၄ ဦးထကျ မနညျး သဆေုံး ကွောငျး ဒသေတှငျးသတငျးရပျကှကျ က ပွောပါသညျ။
“ ကိုးကနျ့ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရ ဒသေ အုပျခြုပျရေးမှူး ပယျစောကျခြိနျ (ပိုငျဆုံခြိနျ) ကိုပဈတာ၊ ဒု အုပျခြုပျ ရေးမှူး လြိုအားပေါငျ ဒဏျရာရတယျ ” – ဟု ဒသေအတှငျး နထေိုငျသူတဦးက ပွောပါသညျ။
တရုတျနှဈသဈကူးမတိုငျမှီ ကုနျးကွမျးမွို့နယျဘကျ ခရီးထှကျသညျ့ ကိုးကနျ့ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရ ဒသေ အုပျ ခြုပျရေးမှူး ပိုငျဆုံခြိနျအား နယျခွားစောငျ့တပျရဲဘျောတဦးကပဈခတျကွောငျး၊ ပိုငျဆုံခြိနျ အားထိ မှနျခွငျးမရှိ သျောလညျး ဒုအုပျခြုပျရေးမှူး အား ထိမှနျဒဏျရာရသှားကွောငျး မကျြမွငျသကျ သမြေားကပွောသညျ။
ဖဖေျောဝါရီလ ဒုတိယပတျကဖွဈပှါးသော အဆိုပါပဈခတျမှုကွောငျ့ ပိုငျဆုံခြိနျ၏ အနီးကပျလုံခွုံ ရေး တပျဖှဲ့ဝငျနှဈယောကျ၊ ဒသေခံအမြိုးသမီးတဈ ယောကျနှငျ့ စဈသားတယောကျ သဆေုံးသညျဟု ဆိုသညျ။
“ဘာမကနြေပျလို့ အဲဒီလိုလုပျရတာလဲမသိဘူး၊ နောကျပွီး အဲဒီတရားခံ နယျခွားစောငျ့တပျသား လေး ကို ဘာလုပျလိုကျလဲ ဆိုတာလဲ မသိရတော့ဘူး” – ဟု တရုတျနယျစပျရောကျ ဒသေခံတဦးက ပွောပါ သညျ။
ပိုငျဆုံခြိနျသညျ မွနျမာစဈတပျနှငျ့ ပူးပေါငျးပွီး အထငျကရ ကိုးကနျ့ခေါငျးဆောငျဟောငျး ဖုနျကွားရှငျး အား ၂၀၀၉ ခုနှဈက ဖယျရှားခဲ့သညျ။ ၂၀၁၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ပိုငျဆုံခြိနျ သညျ ပွညျထောငျစုကွံ့ခိုငျ ရေးပါတီမှ နေ၍ အမှတျ (၁) မဲဆန်ဒနယျ လောကျကိုငျမွို့မှ ပွိုငျဘကျမရှိ ပွညျနယျလှတျတျော အမတျ ဖွဈလာသညျ။
Killings and attacks between DKBA and BGF drives villagers from their homes
On February 24, 2012 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Tension between soldiers from the Democratic Karen Buddhist Army and Border Guard Force troops has forced at least 50 villagers from Mae Tha Waw village, Hlaingbwe Township to seek temporary refuge across the border in Thailand.
A Mae Tha Waw villager explained their situation to Karen News.
“We have fled from our village on February 19, during the night. People say the situation is not good to stay. All the village schools are closing now.”
Villagers say they are now taking refuge with relatives or friends on the Thai border and have yet to receive any humanitarian support.
According toaDKBA soldier from Maw Tha Waw village, on February 20,aBGF sniper shot and woundedaDKBA major at his camp compound in the Myaing Gyi Ngu. A DKBA soldier told to Karen News that recent clashes have created added more tension to an already tense situation. Continue reading “Killings and attacks between DKBA and BGF drives villagers from their homes” →
On February 20, 2012 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ရက်၊ ၂၀၁၂။ စောသိန်းမြင့် (ကေအိုင်စီ)
ကရင်ပြည်နယ်၊ လှိုင်းဘွဲမြို့နယ် မြိုင်ကြီးငူဒေသတွင် တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသား တပ်မတော် (DKBA)မှ နယ်ခြား စောင့်တပ် (BGF)တပ်ဖွဲ့ဝင်များ စီးနင်းလာသည့် ကားတစ်စီးအား ယမန်နေ့က ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ ၅ဦး ထိခိုက်သေဆုံး ခဲ့သည်ဟု ဒီကေဘီအေ ဘက်က ပြောသည်။ Continue reading “DKBA ပစ်ခတ်မှုကြောင့် BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်၅ဦး ထိခိုက်သေဆုံး မှုများရှိ” →